Chikwata Management - Chengdu SDK Medical Technology Co., Ltd.
Yakatsaurirwa kuchirapa chigadzirwa R&D, kugadzirwa uye manejimendi echikwata kweanopfuura makore makumi maviri, akaunganidza ruzivo rwakapfuma mukugadzirwa kwechigadzirwa kwese uye kurapwa kuchipatara.
Mai Wang Xiaolin
Mumiriri Wechikwata cheManeja
Vagadziri vezvigadzirwa zvekurapa vanga vari mubhizinesi kweanopfuura makore gumi, uye ivo vakaunganidza ruzivo rwakawanda muhunhu sisitimu yekushanda, manejimendi uye kunyoreswa kwechigadzirwa kwevagadziri vezvigadzirwa zvemishonga.
Mr. Li Dingquan
Technical Team Mumiriri
Achifunga nezve kuvandudzwa kweyekurapa michina software kweanopfuura makore gumi, akaunganidza ruzivo rwakapfuma mukereke, akawanda epamusoro-chikamu software mitauro, masekiti edhijitari uye kugadzirisa mifananidzo.
Mr. Yan Xi
Gurukota Rezvekutengesa nekutengesa
Inoshanda mukutsvaga uye indasitiri yekutengesa kweanopfuura makore gumi.
Ms. Deng Ling
Gurukota Rezvekutengeserana Kwekunze
Makore manomwe eruzivo muindasitiri yezvokurapa, inozivikanwa neyakajairika bhizinesi maitiro, uye yakaunganidzwa yakapfuma chigadzirwa ruzivo mukutengeserana kwekunze.
Mutungamiriri weGeneral department
Inobatanidzwa mumabasa emakambani uye manejimendi manejimendi.